Izindaba - Kungani ezinye izinja zinehyper kakhulu kunezinye?
Kungani ezinye izinja zine-hyper kakhulu kunezinye?
Sibona izinja nxazonke futhi ezinye zazo zibonakala zinamandla angenamkhawulo, kanti ezinye zibuyiselwe emuva. Iningi labazali bezilwane ezifuywayo liyashesha ukubiza inja yalo enamandla kakhulu ngokuthi “idlamkile,” Kungani ezinye izinja zinehaba kakhulu kunezinye?
Abelusi baseJalimane, iBorder Collies, iGolden Retrievers, iSiberia Huskies, iTerriers — ingabe lezi zinhlobo zezinja zifana ngani? Bazalelwa umsebenzi onzima. Bavame ukuba nokuqina kanye ne-hyper.
Iminyaka yokuqala yomdlwane
Izinja ezisencane ngokwemvelo zinamandla amaningi futhi ezindala zingancibilika nobudala, kepha ezinye izinja zihlala zinomdlandla impilo yazo yonke, kuya ngempilo yazo. Phakathi nale minyaka yokukhula, ukuzibandakanya emphakathini, ukuqeqeshwa okufanele, nokuqiniswa okuhle kungukhiye enhlalakahleni yenja enamandla amakhulu eminyakeni yabo yakamuva.
Ukudla okungabizi ngokuvamile kulayishwa izithako inja yakho engazidingi, njengokugcwalisa, imikhiqizo, ukufaka umbala noshukela. Ukondla izinja zakho ukudla okusezingeni eliphansi kungathinta ukusebenza kwazo, njengokudla ukudla okungenamsoco kungashintsha imizwa yethu. Izifundo zinokuhlobana phakathi kokungasebenzi kahle kanye nezithako ezithile zokudla kwenja, ngakho-ke kunengqondo ukondla inja yakho ukudla okusezingeni eliphakeme ngokumsulwa.
Izinja ezinamandla zidinga ukuzivocavoca okuhanjisiwe futhi ngasikhathi sinye nawe njengomngani wazo oyintandokazi.Ungadlala imidlalo nazo.uphinde ulethe leash yenja, uhambo oluya epaki yezinja luzobagijimisa, bazijabulise, futhi bakhathele ngaphandle isikhathi.